cudurka dhimir beelida:: wardoon.tripod.com
Maxaad ka taqaan cudurka dhimir beelida (Alzheimer)
Cudurka Alzheimer waa nooca ugu badan ee caqli suulidda. Caqli suuliddu waxay dhacdaa iyada oo ka dhalata isbeddellada ku yimaada maskaxda ee saameeya awoodda qofku in uu ku fekero oo wax xusuusto. Waxay noqon kartaa mid aad u daran oo saameysa hawlo maalmeedka. Cudurka Alzheimer maahan qayb caadi ah ee gabow. Qofna ma yaqaanno waxa sababa Cudurka Alzheimer, laakiin cilmi baaris fara badan ayaa la sameeyey. Waxaa laga yaabaa in aad halis badan ugu jirto in uu kugu dhaco cudurkan haddii uu jiray xubin qoyskaaga ka mid ah oo cudurka qabay.
Calaamaduhu waxay u billowdaan si tartiib-tartiib ah wayna kala duwanaan doonaan ama way ka sii dari doonaan. Qofna ma xakamayn karo calaamadaha. Daaweyntu way caawin kartaa, laakiin ma bogsiiso cudurka. Calaamadaha waxaa ku jiri kara:
� Xusuus waayid, gaar ahaanna ku saabsan dhacdooyinkii dhawaa
� Jahwareer ku saabsan waqtiga iyo goobta
� Kala garasho liidata
� Dhibaato dhinaca barashada macluumaad cusub
� Isbeddello ku yimaada awoodda in la sameeyo waxyaabaha sida baabuur wadidda, lacag isticmaalidda, daawo qaadashada, cunto karinta, lebbisashada, iyo qubeyska
Ma jiro baaritaan la isaga sameynayo Cudurka Alzheimer. Takhtarku wuxu:
� Isticmaali doonaa baarid si uu u kala sooco sababaha kale ee xusuus waayidda iyo jahawareerka
� Eegi doonaa qaabka xusuus waayidda iyo wacyi gelinta qofka ee isbeddelka
� La imaan doonaa taxane daawooyin iyo macluumaad uu kala yimid qoyska
� Sameyn doonaa imtixaan jir ahaaneed
� Hubin doonaa xaaladda maskaxeed ee qofka asagoo weydiinaya su�aalo xusuus iyo kuwo fekerba
Ma jirto daawo loogu talogalay Cudurka Dhimir Beelidda (Alzheimer), mana tago. Daawooyinku waxaa laga yaabaa iney caawino ka geystaan calaamado xoogaa ama dib u dhigaan horukaca cudurka. Daawooyinka kale waxay daaweyn karaa dhibaatooyinka hurdada, diiqada, ama niyadkaca. Jir dhis, nafaqo wanaagsan, iyo hawlaha bulshada ayaa sidoo kale muhiim ah.